Soosaarayaasha Hawada Shidaalka, Shirkadaha | Shiinaha Warshadda Kuleyliyaha Gas Gas
Gaaska shidaalka ee SZS ee shidaalka laga soo saaro, wuxuu qaataa labo durbaan oo "D-type" ah oo toosan, qaab dhismeedka darbiga biyaha-filimka, qaab dhismeed macquul ah oo iswaafajsan, ogaada kuleeliyaha awood-balaaran guud ahaan rakibaadda deg degga ah, maalgashiga yar ee kaabayaasha guryaha kululeeyaha iyo muddada rakibidda oo gaaban.
Kuleyliyaha Gas Gas Gas
Xawaaraha Gawaarida Gawaarida iyo Boodhka Shidaalka waa qaab dhismeedka Compact, aagga rakibidda yar, fududahay in la rakibo.
Dusha kuleylka wanaagsan, heerkulka gaaska qiiqa oo hooseeya. Waxaa loo isticmaali karaa Steam ama Biyaha Kulul.
Gaas / Saliid kululeeyaha Biyaha Kulul
Gas Gas Water Boiler WNS taxanaha kululeeyaha uumiga saliida ama gaaska gubanaya waa Horizontal gudaha gubida sedex kuleeliyaha dab kuleylka, wuxuu qaataa foornada kuleeliyaha qaabdhismeedka gadaal qoyan, qiiqa heerkulka sareeya, gaaska leexashada si uu uxaaro saxanka tuubada qiiqa labaad iyo seddexaad, kadib qiiqa kadib qolka lagu sii daayay jawiga tubbada qiiqa.
Kuleyliyaha Saliida Shidaalka
Oil Steam Boiler WNS taxanaha kululeeyaha uumiyaha saliida ama gaaska gubanaya waa Horizontal gudaha gubida sedex kuleeliyaha dab kuleylka ah, wuxuu qaataa foornada kuleeliyaha qaab dhismeedka gadaal qoyan, qiiqa heerkulka sareeya, gaaska leexashada si uu uxarago saxarada tuubada qiiqa labaad iyo sedexaad, kadib qolka qiiqa kadib . lagu sii daayay jawiga tubbada qiiqa.
Gas Steam Boiler WNS kuleylka uumiga uumiga ah ee shidaalka gubanaya ama gaaska waa mid la mid ah gubashada gudaha gudaha sedex dabeyl dabeysha, waxay xayeysiisaa kuleylka haanta qulqulka, qiiqa heerkulka sare, gaaska gaaska si uu u buuxiyo tuubada qiiqa labaad iyo seddexaad, ka dib qolka qiiqa ka dib . lagu sii daayay jawiga tubbada qiiqa.